'Undibize Njani Ngegama Lakho' Ufumana Ulandelelwano Olungaqhelekanga Kangako ku'Ndifumane '? - Ubugcisa
Eyona Ubugcisa 'Ndifumane' Ngaba u-André Aciman ulandela u-Dull 'ukuze andibize ngegama lakho'
'Ndifumane' Ngaba u-André Aciman ulandela u-Dull 'ukuze andibize ngegama lakho'
Ndifumane nguAndré Aciman.UAndre Aciman
Abafundi banomdla wokudibana-okanye ukukhankanywa-kuka-Elio no-Oliver kwi Ndifumane , Ulandelelwano lukaAndré Aciman kwinoveli yakhe ka-2007 Ndibize Ngegama Lakho (eyayilungiselelwe ifilimu ye-2017 hit), kufuneka uzive ukhululekile ukutsiba iphepha lokuqala lencwadi le-100. Okanye, eneneni, yeqa yonke incwadi: ukudibana kwakhona ekugqibeleni kungumbumbulu kwicandelo lokugqibela sele kuchaziwe Ndibize Ngegama Lakho -Kunye neenkcukacha ezintle.
Kubonakala kungaqhelekanga ukubhala enye incwadi esele ithathe ixesha lokucacisa abalinganiswa bayo 'kwiminyaka yamva, kwaye bayanqwenela ukucinga ukuba kunokubakho okungaphezulu kokubhikica kwincwadi yokuqala emangazayo, nesiphelo esibuhlungu. Ukanti u-Aciman (okanye abapapashi bakhe) wayesazi ukuba le ncwadi izakwenza isitokhwe esinqwenelekayo, ke ngoku silapha, sinamaphepha angama-260 okuhlangana kwamathuba, izidlo ezibizayo, kunye nelitye elinqabileyo elifundeka ngathi Isobho senkukhu yomphefumlo ophindwe kabini-kwi-Terre .
BONA KWAKHO: UMary Gaitskill Uvavanya uLwimi lweNtlungu kuYe #MeToo Tale, 'Olu luyolo'
Njengakwincwadi yakhe yokuqala, abantu esibalandelayo Ndifumane bafundile kwaye batyebile ngokungaqondakaliyo. Oku kunokwenza kube lula ukuba nomona kunye nokufaka abalinganiswa, kodwa ukubhala kungaphefumlelwanga kwenza ukuba naluphi na uhlobo lonxibelelwano lungalawuleki. La maphepha okuqala ayi-100 abhekisa kutata ka-Elio, uSamuel, ngoku wohlukene nenkosikazi yakhe esiya eRoma esiya kutyelela unyana wakhe osele ekhulile, owenza umsebenzi wokuba ngumdlali wepiyano onesiphiwo. Izicwangciso zikaElio ziyatshintsha, anyusa ishedyuli kayise kunye nobomi njengoko kudibana le yokugqibela, suoons over, kunye neenkundla uMiranda, umfazi isiqingatha seminyaka yakhe adibana kuloliwe.
Apha u-Aciman ungene kwindawo enzima yokujonga amadoda, into enokuthi ibonakale ngakumbi kuyo Ndibize Ngegama Lakho bekukho abalinganiswa ababhinqileyo benyama. Eyona nto ibalulekileyo kwezi nkcazo zibandakanya kwaye nangona kunjalo, nangona wayenamehlo amdaka, wayenamehlo aluhlaza kunye namashiya amnyama, kwaye kwiminyaka eyadlulayo… ndalahleka kwilizwe langaphambi kwexesha lamaSilamsi eConstantinople, ukanti isidoda sesidoda esivela kwiigonads zakhe Ngaba uMiranda wayengakhange akhululwe.
Oh nkwenkwe. Ngaphezulu kwayo yonke le nto, u-Aciman uchaza iimvakalelo zesibini esingalindelwanga kangangokuba uziva ngathi ngumbongo we-amateur (Uyinto yeoksijini kum, kwaye bendihlala kwimethane; Ayizizo ezona meko zibi kakhulu: izinto kungenzeka ukuba ayenzekanga kodwa khange yenzeke.) Ukubhala kuyingozi kakhulu kwaye yeyona sappy. Ekugqibeleni, uSamuel noMiranda bahlala kunye kwikhaya lolwandle lwangaphambili kuba, ngoba?
Isantya sithatha kwisahluko esilandelayo no-Elio, ngoku ohlala eParis kwaye udlala iBach eninzi kodwa ucinga ngo-Oliver ngaphezulu. Emva kwekhonsathi, uElio, 32, udibana nendoda ephindwe kabini ubudala bakhe, uMichel, kwaye bobabini bazama ukuzama iiveki. Ukubhalwa apha kuvakala ngakumbi organic; kukho imibane yemililo yomnqweno olayitiweyo Ndibize Ngegama Lakho , ngakumbi kwiindlela zangaphambili u-Aciman uvumela esi sibini ukuba sisondele ngokukhawuleza kwaye babelane ngesondo. Nangona kunjalo, icebo lobulumko, uMichel lilitye nje lokunyathela uElio ukuba - umonakalisi- aqonde ukuba nguOliver onqwenela kakhulu kunye neemfuno.
Oku kusizisa esiphelweni sencwadi, apho sifumana uOliver kwitheko lokuvalelisa kwisiXeko saseNew York, eshiya into ekucingelwa ukuba yiYunivesithi yaseColumbia ukuba ayohlala nenkosikazi yakhe ngaphandle kwengxolo yaseManhattan nasecaleni kweNew Hampshire . (Ukuphinda kuvezwe kwabalinganiswa ababhinqileyo kuthetha ukubuya kwe-misogyny: qaphela umhlobo womfazi wakhe, owathi, ngaphandle kwempawu yokuzalwa, wayengenabo ubuhle.) Umbono wokuphoswa e-New Hampshire, ukuba nenkosikazi yakhe kuphela kwinkampani, nokuba kude neNew Ukufika kuka-queer wase-York uthumela u-Oliver phantsi kwento enokuthi ichazwe njengengxaki ebhaliweyo yobomi, kwaye ke ufowunela uElio kwaye awele iAtlantic kwakhona.
Akukho zintlantsi zibhabha kumaphepha ambalwa okugqibela apho aba babini baphinde badibana khona, kodwa bangakwenza njani oko? Iintlantsi zifuna imikhosi yokurabana, umxube wobushushu kunye noxinzelelo, kunye Ndifumane uziva ngathi kukubetha i-noodles ezimanzi ezingazange zicele ukuba ziphekwe.
UKim Kardashian kunye neKhan West West's Record-Setting Bel Air House ibuyile
Owayesakuba ngumntwana weNkwenkwezi uHayley Mills ngendlela abalandeli kunye neHollywood abazame ngayo ukumenza ahlale emncinci
U-Bill Irwin uguqulela u-Beckett waBaphulaphuli abaQinisekisiweyo kwi-Solo Show ekwi-Intanethi
Eyona webhusayithi yokuthenga ii-vape mods
uyinkwenkwe elungileyo ehlekisayo
ungayithenga ijusi yevape kwiAmazon
Umfazi uhamba ejikeleza new york
inkqubo ukuhluza amanzi ekhaya lonke
yeyiphi kwezi zilandelayo engeyonyani malunga nekati genovese?